हाम्रो बारे - डिडलिंक समूह कं, लिमिटेड
हामी कसरी सुरु गर्न सक्छौं?
DIDLINK GROUP एक ​​पेशेवर पेट्रोलियम, रसायनिक, सन् १ 1998 1998 from देखि चीनमा समुद्री भल्भ समूहको कम्पनीमा संलग्न छ।
हाम्रो स्थापना पछि, हाम्रा उत्पादनहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, रसिया （सीआईएस), दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, अफ्रिका आदिमा निर्यात गरिएको छ।
हाम्रा उत्पादनहरूले हाम्रा ग्राहकहरूबाट उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त गरेका छन्।
हाम्रो मुख्य व्यवसाय क्षेत्र निम्नानुसार छ
गेट वाल्भहरू, तितली वाल्भहरू, ग्लोब भल्भहरू, चेक वाल्भहरू, बल भल्भहरू, प्लग भल्भहरू, आदि
सामग्री समावेश: कार्बन स्टील, Staninless स्टील, पीतल ETC.
हाम्रो कारखानासँग प्रमाणपत्रहरू छन्: ISO9001, CE, API, EAC, ETC.
DIDLINK GROUP ले विनिर्माणको शुद्धता र नक्कलताको पीछा गर्दछ। लगातार आफ्नो दुबै उत्पादन उपकरणहरू सुधार गर्नुहोस्, प्रत्येक भाग सहित। र हामी सावधानीपूर्वक निर्माणको मापदण्डको साथ कडा रूपमा छौं, उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू सुनिश्चित गर्न। उच्च सटीक उत्पादनहरू सिर्जना गर्न आदेशमा।
हामीले ठूलो संख्यामा उच्च सटीक सीएनसी मशीनिंग केन्द्रहरू खरीद गरेका थियौं। स्वचालित प्रसंस्करण उपकरण र सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल व्यवस्थापनले प्रशोधन प्रक्रियाको शुद्धता र उत्पादन दक्षतालाई बृद्धि गर्दछ र उत्पादनहरूको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्दछ।
स्केल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट्स उद्यम शक्ति र ब्रान्ड
केही फरक पर्दैन, कम्पोनेन्टहरू वा आफैं निर्मित उत्पादनहरू, हामी उत्पाद नियन्त्रण प्रक्रियाको मानक प्रणालीको कडाईका साथ पालन गर्दछौं, जसले गर्दा उत्पादनको प्रदर्शन र गुणवत्तालाई कुनै नोक्सान बिना ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ र हामी कहिले पनि ग्राहकहरूलाई चिन्तित तुल्याउँदैनौं। ईआरपीको प्रभावकारी नियन्त्रण, एमईएस र बार कोड प्रणाली, उत्पादन, प्रसंस्करण र भल्भियर को सबै भागहरु को परीक्षण को गुणवत्ता का प्रबंधन निरन्तर अनुकूलन प्राप्त गर्न को लागी।
मिश्र धातु इस्पात बल भल्भहरू, कांस्य बल भल्भ, स्टेनलेस स्टील बल भल्भ, सेनेटरी स्टेनलेस स्टील बल भल्भहरू, पीटीएफई सीटहरूको साथ कांस्य बल भल्भ, स्टेनलेस स्टील बल भल्भहरू,